Bazohlangana ngoJanuwari abamavoti “anyamalele” | News24
Bazohlangana ngoJanuwari abamavoti “anyamalele”
Johannesburg – Amalugu e-ANC aseLimpopo abayingxenye yabangu-60 abanamavoti angazange abalwe kwinkomfa bazoba nomhlangano eLuthuli House ngoJanuwari.
Ummeli wabo uDexter Selepe, utshele abeNews24 ukuthi laba bahlangane namalungu aphezulu kuleli qembu eLuthuli House ngoLwesihlanu kwavunyelwana ukuthi kumele kuqoqwe ubufakazi obanele bese kuyahlanganwa futhi.
USelepe uthi amakilayenti akhe avumile ukuthi azobuya lapha nobunye ubufakazi ngemuva kokugujwa kweminyaka engu-106 kaKhongolose.
OLUNYE UDABA:Ngeke abuyele kwi-ANC uMalema - Madikizela-Mandela
NgoLwesithathu olwedlule, ngosuku lokugcina lwenkomfa kaKhongolose, laba banikeza uKhongolose umnqamulajuqu wokuba aphendule izikhalazo zabo ngalolu suku.
Lo mmeli uthi amakilayenti abo afuna amavoti abo abalwe nabo ngethemba lokuthi lokhu kuzoguqula izinto zivune lowo owayenguNdunankulu wakwaZulu-Natal uSenzo Mchunu ohlulwe wuNdunankulu waseFree State u-Ace Magashule ngamavoti esikhundleni sokuba wuNobhala-Jikelele we-ANC.